के हाे कलाकार पल शाह र समीक्षा अधिकारीकाे विवाद ? - Parichaya.com
दुवैले दिए पालैपालाे स्पष्टीकरण
By परिचय	 On ८ कार्तिक २०७८, सोमबार १४:३४ 0
नायक पल शाह र गायिका समीक्षा अधिकारी केही समययता चर्चामा छन्। उनीहरूबीचको अन्तरंग सम्बन्धबारे फिल्मनगरीमा चर्चा चल्न थालेपछि यी दुई केही समयदेखि मिडियासँग समेत साक्षात्कार गर्न डराइरहेका थिए ।
समीक्षा र पलको ‘प्रेम प्रकरण’ बारे चियोचर्चो सुरू भए पनि यो चियागफमै सीमित थियो । यसबारे पूर्ण जानकार कोही थिएनन्. तर यकिनका साथ भन्ने पनि कोही थिएनन् । यो विषयमा बोल्न उनीहरू तर्किए पनि अन्ततः बोलेका छन् । एक सातायता चर्चामा रहेका यी दुईको सम्बन्धको विषयमा गसिप र समाचार आउन थालेपछि समीक्षा र पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो सम्बन्धलाई प्रस्ट पार्न खोजेका छन् ।
पलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफुलाई हुँदै नभएको र नगरिएको आरोप लगाइएको बताएका छन् । ‘काम गर्ने क्रममा व्यक्ति वा समूहसँग नजिक भइन्छ र सांगीतिक सहकार्य समीक्षासँग भएको हो’ पलले लेखेका छन् ,’पछिल्लो केही दिनयता आएका खबरले मेरो शुभचिन्तकसँगै परिवारलाई समेत दु:खी बनाएको छ ।’ समीक्षासँग रहेको मित्रतालाई अन्य नाम नदिन आग्रह गर्दै उनले चरित्र हत्या हुने गरी समाचार नबनाइदिन आग्रह गरेका छन् ।
यस्तो छ पल शाहद्वारा सार्वजनिक गरिएको भनाई :
यस्तै समीक्षाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत नै आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेकी छन् । उनले पलसँग जोडिएर आएको समाचारहरू कपोकल्पित रहेको उल्लेख गरेकी हुन् । ‘पलजीसँगको सम्बन्धलाई तोडमोड गरेर आएको समाचारले मेरो चरित्रहत्या भएको छ’ उनले लेखेकी छन्, ‘एउटै नगरीमा रहेकाले उहाँले मलाई अभिभावकको हिसाबले माया गर्नु हुन्छ र दर्शकको माया पाएसम्म हाम्रो सहकार्य रहिरहने छ ।’
यस्तो छ समीक्षाद्वारा सार्वजनिक गरिएको भनाई :
मलाई समीक्षा अधिकारी बनाउनु हुने मेरा सम्पूर्ण दर्शक स्रोताज्यूहरुमा हार्दिक नमन गर्दछु। पछिल्लो समय मेरो बारेमा नायक पल शाहज्यूसँग जोडेर हुँदै नभएको कपोलकल्पित समाचारहरू आएका छन्, यसप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। समाचारमा मेरो र पलजीको सम्बन्धलाई तोडमोड गरेर तुच्छ प्रकारका कुराहरू मेडियामा आएका छन्, जसले मेरो चरित्रहत्या भएको छ। यसका साथसाथै पलजीको क्यारिअरमाथि आँच आउने किसिमले सस्तो प्रचार बाजी गरिराको छन्। यसो नगर्नु हुन अनुरोध गर्दछु। बिनास्रोत अफवाहमा लेखिएका यी समाचारले हामीलाई सामाजिक र चारित्रिक रूपमा निकै नै असर पुर्याएको छ, यस कुराप्रति म र मेरो परिवार खेद प्रकट गर्दछौ । एउटै इन्डस्ट्रिजमा भएको हिसाबले पलजीले मलाई अभिभावकको हिसाबले माया गर्नुहुन्छ । मेरो कला र क्षमतालाई माया संरक्षण गर्नुहुन्छ म उहाको सदैव फ्यान पनि हुँ। र, हजुरहरूको माया रहेसम्म सधैं राम्रो काम गरिरहने छौ। राष्ट्रको चौथो अंग मानिएको पत्रकारिताका अग्रज र दिग्गज अभिभावकहरूले पनि यसरी मानहानि र चरित्रहत्या हुने किसिमले लेखिएका समाचारले निकै दुःखी छु। मैले यो अपेक्षा गरेको थिएन । म जे छु जहाँ छु, यो सब मेरा भगवानरूपी दर्शक स्रोताको देन हो र हजुरहरूलाई कुनै पनि कुराले निराश गर्न सक्दिनँ र गर्ने छैन। मेरो बारेमा मिडियामा आएका झुटा समाचारहरूप्रति घोर निन्दा गर्दछु र हजुरहरू यसको पछाडि नलाग्नुहुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्त्यमा सम्पूर्ण पत्रकारज्यूहरूलाई पनि हार्दिक निवेदन गर्न चाहन्छु, कसैको व्यक्त्तिगत जीवनमा आँच आउने मानहानि तथा चरित्रहीन हुने किसिमको समाचार नबनाउनु होला।
केही समययता पल र समीक्षाको प्रेमको चर्चा फिल्मनगरीमा छ । पछिल्लो समय पलको म्युजिक भिडियोमा व्यस्तता अत्यधिक छ । तर यो चर्चा चलेयता उनले इभेन्टमा सहभागिता जनाउन छाडेका छन् । उनलाई भिडियोमा अभिनय गराएका एक निर्देशकले पलले इभेन्टमा आफू नआउने बताउने गरेको खुलाए । ‘पलजी भिडियो सार्वजनिक कार्यक्रममा भने नआउने भन्नु हुन्छ’ उनले भने । यी दुईको बीचमा सहकार्यबाहेक अन्य केही नरहेको अवस्थामा मिडियासँग साक्षात्कार गर्न डराइरहेका छन् ? त्यो त यिनैले जानून् ।
पल र समीक्षा प्रेम चर्चा :
म्युजिक भिडियो छायांकनकै क्रममा पल र समीक्षा नजिकिएका हुन् । समीक्षाको गायन रहेको गीतको भिडियोमा समीक्षासँगै पल मोडल रहेका थिए। यही सहकार्यले यी दुईको सामीप्यता बढेर प्रेममा परिणत भएको हल्ला छ । समीक्षाले त्यसलाई ‘प्रेम’ कै रूपमा बुझे पनि पलले हल्काफुल्का रूपमा हेर्न थालेपछि यी दुईको चर्चा फिल्मनगरीमा चुलिएको हो । पलको सम्बन्ध अन्य फिमेल मोडलसँग प्रगाढ हुँदै गइरहेको र आफूसँग टाढिएको महसुस गरेपछि समीक्षाले आफूसँग रहेका डिजिटल प्रमाणहरू (फोटो/भिडियोहरू) सहित पुलिस केस गर्ने तयारी थालेपछि यो ‘प्रेम’ को चर्चा फिल्मनगरीमा बढ्न थालेको हो । समीक्षा नाबालिग भएकाले उमेर पुगेपछि पलले विवाह गर्ने सहमति गरेको चर्चा बढ्दो छ । पलले आर्थिक प्रलोभनसमेत दिएको बताइन्छ । यद्दपी समीक्षा र उनका परिवारहरूले विवाह गर्नु पर्ने अडान राखेपछि सम्झौता उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने भएको बताइन्छ ।